भाग्य र शिशिरका लागि दृस्ठिबिहिनले गाए मनै छुने यस्तो गित, भावुक हुँदै दिए यस्तो प्रतिक्रिया ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
भाग्य र शिशिरका लागि दृस्ठिबिहिनले गाए मनै छुने यस्तो गित, भावुक हुँदै दिए यस्तो प्रतिक्रिया !
Published : 11 August, 2020 9:10 am
केही समय अगाडी कार्टुनमा भेटिएको भनिएको बच्चाको बास्तबिकता बुझ्दा धेरै चकित बने भेटिएको भनिएको बच्चालाई देश तथा बिदेशबाट धेरै सहयोग आयो । भाग्य न्यौपाने शिशिर भन्डारी लगायतका धेरै सहयोगिहरुले सहयोग गरेका थिए । तर त्यो सबै झुटो भन्ने स्पष्ट भएसङै भाग्य न्यौपानेले आफुले सहयोग गरेको पैसा फिर्ता नै लिए ।
भिडियो बनाए तर अहिले त्यो भिडियो अन्तरबार्ताका बिषयमा धेरैले राम्रो अनि धेरैले नराम्रो प्रतिक्रिया दिदै आएका छन । भाग्यले लिएको अन्तरबार्ता निकै चर्चामा छ अनि बिबादमा छ । अहिलेको यो एक घटनाले फेरि पुष्टि गरेको छ कि मान्छेले पैसाको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ । नौं नौं महिना कोखमा राखेर दुख कष्ट गरेर जन्म दिने आमाले नै आफ्नी शिशुलाई झाडीमा लगेर फाल्छिन् होला त!
भन्ने एक कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । तर यही साउन १२ गते एउटी निर्दयी आमाले पैसा कमाउने लोभमा त्यसै गरेको तथ्य खुलेको छ । घटना यही साउन १२ गते सोमबारको दिनको हो । काठमाडौंको कपनमा कागजको कार्टुनमा शिशु फालिएको समाचार भाइरल बन्यो सनसनी बनेर फैलियो ।
कपनको चौरमा कार्टुनमा फालिएकी शिशुलाई सोही क्षेत्रमा रहेको केयर बालगृहकी संस्थापक पुष्पा अधिकारीले पालन पोषणको जिम्मा लिएपछि उनलाई सहयोग गर्न देश विदेशका नेपाली मनहरु रातारात ओइरिए । तर यहीँ बिषयमा सबै झुटो साबित भएपछी भाग्य न्यौपाने शिशिर भन्डारी लगायत अन्य केही संचारकर्मीहरुले फैसा फिर्ता मागेका थिए । भाग्य न्यौपानेले लिएको एक अन्तरबार्तालाई लिएर अहिले चौतर्फी बिरोध भइरहेका बेला पुर्बका एक दृस्ठिबिहिन कलाकार आक्रोशित हुँदै मिडियामा आएका छन ।
भाग्य न्यौपानेको मनै छुने कसैले नदेखेको भित्री कहाँनी बिगतदेखि बर्तमानसम्मको सम्पुर्ण नालीबेली भावुक हुँदै बताएका छन । भाग्य न्यौपाने र शिशिर भन्डारी नेपालका साथै बिदेशमा फसेका धेरै गरिब दुखी नेपाली उद्दार गरेको अनि हजारौं घाउमा मलम पट्टी लगाएको भुल्न नहुने बताउदै भाग्य र शिशिरलाई फसाइयो भने आफू चुप नबस्ने बताउदै आँखा नदेख्ने तर कलाले भरिपुर्ण दाजुले पुष्पालाइ पनि कडा चेतावनी दिएका छन ।
भाग्य र शिशिरका लागि परिआए आफू मार्न र मर्न समेत पछि नपर्ने बताए । दृस्ठिबिहिन दाजुले पुष्पाका सम्पुर्ण भित्री रहस्य र नालीबीली बताउदै भाग्य र शिशिरका लागि मनै छुने गित गाएका छन ।
पाथिभरा माताको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस तपाइको भाग्य कस्तो?
मेष (चु.चे.चो.ला.लि.लु.ले.लो.अ) : आजको दिन सामाजिक र धार्मिक काममा गर्नुहुने कामबाट तपाईँलाई मानसम्मान मिल्नेछ ।
सुत्नुअघि पशुपतिनाथको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस | तपाईको भाग्य कस्तो?
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) पारीवारिक झोर झमेलाले सताउनेछ
सुत्नुअघि पाथिभरा माताको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस | तपाइको भाग्य कस्तो ?
नेकपा एमाले को १० औं महाधिवेशन उदघाटन समाहारो सकिए संगै एमालेका युवा कार्यकर्ताहरु शहर सफा गर्न थाले
चितवन। नेकपा एमाले को १० औं महाधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ । चितवनको नारायणघाटको नारायणी
एमालेले निकालेको व्यक्ति राखेर संसद चल्न सक्दैन : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंसिर २८ गते बोलाइएको संसद अधिवेशन पनि चल्न नदिने
ट्याक्टरलाई बसले ठक्कर दिँदा १ जनाको मृत्यु !
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका– ८ चुवाको पराधिमा आज बिहान बसले ट्याक्टरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको घटनास्थलमै
थानेश्वरकोे गजल भित्र कोरिएको ‘तिम्रा यादहरु मलाई’
गजल गीतमा अगाडि रहेका गायक थानेश्वर गौतमकोे नयाँ गजल गीत ‘तिम्रा यादहरु मलाई’ सार्वजनिक गरिएकोे
प्रिज्मा र प्रिन्सीसँग अमर र अमृतकोे ‘छल छल’